Google Currents တွင် Martech ယခုရနိုင်သည် Martech Zone
သင့်တွင်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုရှိပါကကြည့်ရှုရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်သည်။ Google ကကယ်ဆယ်ရေးကိုလာပါတယ် Google Currents.
Google Currents သည် Steroids များပေါ်တွင် Google Reader ဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် ၄ င်းတို့ကို Google Currents Producer ကို အသုံးပြု၍ ဖွဲ့စည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
စာရင်းသွင်းရန်သေချာစေပါ Google Currents ပေါ်ရှိ Martech။ ငါတို့ကဏ္ sections တွေအားလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲထားတယ်၊ ရေဒီယို၊ ဗီဒီယိုနဲ့ငါတို့တောင်မှပါမယ် ဂူဂယ်လ် + အကြောင်းအရာ!
Tags: ရေစီးကြောင်းgoogle currents+ googleipadiphoneတက်ဘလက်
subdomain များ၊ SEO နှင့်စီးပွားရေးရလဒ်များ